The Ab Presents Nepal » प्रहरी नायब निरीक्षक यौनहिंसामा पक्राउ, भिडियो खिचेर वर्षौं ब्ल्याकमेल – पुरा बिबरण हेरेर सक्दो सेयर गरेर सहयोग गर्नुहोस!
प्रहरी नायब निरीक्षक यौनहिंसामा पक्राउ, भिडियो खिचेर वर्षौं ब्ल्याकमेल – पुरा बिबरण हेरेर सक्दो सेयर गरेर सहयोग गर्नुहोस!
जेठ: विवाह गरेर आएको केही समय मात्रै भएको थियो, नाताले भिनाजु पर्ने सई रामविनोद यादवले श्रीमान् नभएको मौकाछोपी मलाई जबरजस्ती ग¥यो । एक पटकको दुव्र्यवहार मैले आँसु पिएर सहेकै थिएँ । फेरि पनि यौन सम्बन्धका लागि बोलायो । मैले ठाडै इन्कार गरेँ । तर उसले पहिलो सम्पर्ककै बेला भिडियो खिचेर राखेको रहेछ, त्यो देखेपछि म यौनदासी बनेर उसले जहाँ भन्छ त्यहीँ जान थालें । अहिले एक वर्ष भयो, ऊ जहाँ–जहाँ सरुवा हुँदै जान्छ म त्यहीं उसको वासना पूरा गर्न पुग्छु ।’ बालविवाहको पीडा पनि भोगेकी १८ वर्षे किशोरीले प्रहरीलाई बयान दिंदै भनिन् । जनकपुरधाम माइती भई रौतहटको गौरमा विवाह गरी आएकी किशोरीलाई पहिला यादवले नाता जोड्दै सहयोगी व्यवहार देखाए ।
म मातेर लडेपछि उसले भिडियो खिचेको रहेछ ।त्यो दिन म सम्झन पनि सक्दिनँ । माइत गएर केहि दिन पछि घर फर्किएपछि उसले त्यस दिनको भिडियो आफूसँग रहेको भन्दै मलाई धम्क्यायो ।’ किशोरीका अनुसार मोबाइल अलि टाढै राखेर यादवले भिडियो देखाए, जहिले भन्यो त्यहिले सम्पर्कका लागि राजी नभए उनले भिडियो सार्वजनिक गरिदिने धम्की थिए । ‘घर बिग्रने डरले म उसले जे जे भन्यो त्यो मान्न तयार भएँ ।
त्यसकै फाइदा उठाउँदै उसले धेरै पटक ममाथि शोषण ग¥यो । मानसिक र शारीरिक रुपमा गरेको शोषणको बयानै गर्न सक्दिनँ ।यादवले किशोरीको शहरमै मात्र पनि शोषण गरेनन्, टाढा–टाढा पु¥याएर पनि शोषण गरे ।अन्तिम पटक २०७६ वैशाख महिनामा काठमाडौ जाऔं भन्यो, म लुरुलुरु पछि लागें । नगरकोट पु¥यायो । त्यहाँ उसले दुई दिनसम्म राखेर बारम्बार यौनशोषण ग¥यो । त्यसपछि भने मैले सहन सकिनँ। जे होला होला भन्ने आँट गरेर आफन्तसँग सल्लाह गरें।